Semalt: Kuyini Ukudluliselwa KweDarodar.com?
Uma uhlola i-akhawunti yakho ye-Google Analytics njalo, ungase ubone ukuthi kukhona umthombo wokudlulisela eziteshini zokuthenga. Ngokubona, le mithombo ibukeka ingenacala uze uhlole kahle ukuthi kwenzekani ngedatha yakho ye-analytics. Abaphathi bewebhu nababhulogi abahlukahlukene bayaqaphela inani elikhulu lomgwaqo eliza kumawebhusayithi abo kusuka ku-darodar.com. uchwepheshe we-Semalt , uJulia Vashneva, uxwayisa ukuthi lo mgwaqo wamanga awukhawulelwanga ku-darodar.com, uvela kumathani ezinye ukuhanjiswa nezixhumanisi zawo ezihlobene njenge-websitebuttons yamahhala, i-kambasoft, i-7makemoneyonline, nabanye. Lezi zindawo ziphakamisa ifulegi elibomvu labama-webmasters, amabhizinisi, nabathengisi, futhi yisikhathi sokuthola ukuthi i-darodar.com yilethi nokuthi isevisi yokugaxekile yogaxekile isebenza kanjani.
Ngo-2013, abanye abakwa-webmasters babone ukuvakashelwa okudluliselwa okuhlukile kusuka kwisayithi eyaziwa ngokuthi i-darodar.com nokuhluka kwayo. Abantu bathole ukuthi amasayithi abo athola ukuvakashelwa okungu-200 kuya ku-2000 ngenyanga kusukela kumawebhusayithi angaziwa futhi asolisayo, futhi izinga lokunciphisa lalingu-100% okusho ukuthi izivakashi azichithelanga ngaphezu kwesigcawu kumasayithi abo. Ngokushesha abanikazi besayithi kanye nabakwa-webmasters bakhubeka ku-darodar njengenethiwekhi evelele kakhulu yokudluliselwa kogaxekile.
Kuphephile ukuphawula ukuthi izimakethe ze-darodar.com ngokwayo njengenkampani engcono kakhulu ye-SEO esiza ukuthuthukisa isimo sesayithi lakho. Eqinisweni, le nkampani ingcolisa i-akhawunti yakho ye-Google Analytics ngethrafikhi engalungile futhi inkinga enkulu ukuthi akunakwenzeka ukulahla ugaxekile wokudlulisela. Ochwepheshe bewebhu bathi i-darodar ilethe amaqhinga omnyama we-SEO abuyele emsebenzini. Le nkampani ivele njenge-giant yokudluliselwa kokugaxekile futhi amathuluzi ayo okuthiwa ama-webmaster ahlose amawebhusayithi amancane nezinkulu ezinenani labavakashi abaphansi. Ngamanye amazwi, singasho ukuthi leli sayithi alikhathazi ukuletha ithrafikhi yangempela kanye nezinhloso zamabhizinisi amancane kuya kwaphakathi ukuze kuthuthukiswe isigaba sazo.
Uma uzibuza ukuthi i-darodar.com isebenza kanjani, ake ngikutshele ukuthi i-bots kanye nezinsipho zayo zithumela izicelo zezicelo zokungena ngemvume ezitholakala kuwe esidlangalaleni. Zonke lezi zicelo zingene ngemvume finyelela ifayela le-HTML, bese ubonisa ukuvakashelwa kokudluliselwa ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Kukholelwa ukuthi i-darodar.com ithumela inqwaba yezivakashi zamanga kumasayithi kanye ne-data ye-Google Analytics. Inkinga enkulu ukuthi i-bots ukungahambisani nomyalo we-robots.txt owacela ukuba angabhalisi. Amafayela eRobots.txt asetshenziselwa ukudambisa ama-bots wangempela ekubhaleni iwebhusayithi yakho nokuqoqa ulwazi. Abakwa-web crawlers abaningi bafinyelela kuma-server wesayithi lakho nsuku zonke.Google nezinye injini yokusesha s isebenzisa abakwa-crawlers ukuze babhale indawo yakho, futhi yilokho i-darodar.com nayo.
Akufanele nanini uvakashele i-darodar.com noma yimuphi omunye isayithi elihambisana nabo uma ufuna ukuqinisekisa ukuphepha kwakho kwi-intanethi. Futhi, akufanele usebenzise ama-plugin ayo futhi ungazami ukususa i-darodar.com kusuka kumiphumela yakho yosesho . Okubaluleke nakakhulu, kufanele ususe isilondolozi ukuqinisekisa ukuthi i-darodar.com nabalingani bayo abangekho emlandweni wakho. Ukuqeda lokhu kuthunyelwa kogaxekile, kufanele uyihlunge kusuka ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Nakuba angeke neze iqede i-bots ekuvuleni isayithi lakho, izosusa idatha ehlongozwe ezungeze i-darodar.com nezinkinobho-ze-website. Ungavimba futhi i-darodar.com kwifayela le-.htaccess, futhi lokhu kungenziwa ngokufaka ikhodi ethile phezulu kwe-URL yakho.